यी बलिउड नायिकाले खाए जीवनभर विवाह नगर्ने कसम – Khabar Silo
काठमाडौं । बलिउड नायक-नायिकाको विवाहको चर्चा सधै हुने गरेको छ । तर यहाँ यस्ता नायिकाहरुको चर्चा गरिएको छ जसले जीवनभर विवाह नगर्ने कसम खाएका छन् –
२. तबस्सुम फातिमा हाशमी
बीबीसीको रिपोर्टका अनुसार देवानन्दले सुरैयालाई पहिलो पटक फिल्म ‘विद्या’ को सेटमा भेटेका थिए । देवानन्दले आफूलाई परिचय दिदै भनेका थिए , ‘सबैले मलाई देव भन्छन्। तिमी मलाई कुन नामले बोलाउन चाहन्छौ?’ सुरैयाले भनिन्- ‘देव’
आनन्दले आफ्नो आत्मकथा रोमान्सिंग लाइफमा लेख्छन्, गीत ‘विद्या’ सेटमा बजिरहेको थियो, क्यामेरा रोल भनियो । सुरैयाले मलाई पछाडिबाट अँगालो हालिन्। मैले उनको लामोलामो सास महसुस गरे। मैले उनको हातमा चुम्बन गरे र त्यसपछि उनी तर्फ फर्किएर चुम्बन गरे। ” सुरैयाले उनको हातको पछाडिको भागमा चुम्बन गरिन्। निर्देशकले चिच्याए भने, ‘ग्रेट शट’ र त्यसपछि दुई बीच प्रेम सम्बन्ध शुरू भयो।
जब सुरैया र देव आनन्दको प्रेम सम्बन्धको चर्चा सम्पूर्ण फिल्म जगतमा हुन थाल्यो, सूरियाकी हजुरआमाले पनि थाँहा पाइन् । उनले देव आनन्दलाई घर आउनमा प्रतिबन्ध लगाइन् । यद्यपि सुरैयाकी आमा देव आनन्दलाई धेरै मन पराउँथिइन्, तर घरमा सुरैयाकी हजुरआमालाई हुकुम चल्थियो र सुरैया – देव आनन्दको सम्बन्धमा उनको कडा आपत्ति थियो।
त्यस समयमा जब सुरैया र देव आनन्दको प्रेम सम्बन्ध बढ्दै थियो, देव आनन्दको फिल्म क्यारियर उक्लदै थियो । साथै सुरैया एक स्थापित नाम भइसकेकी थिइन्। देव आनन्दल सुरैयालाई धेरै माया गर्थे । उनको आत्मकथा ‘रोमान्सिंग विथ लाइफ’ मा भनिएको छ ती दिनहरुमा देव साहेबले सुरैयालाई तीन हजार रुपैयाँ मुल्यको हिराको औंठी दिएका थिए।
स्टारडस्ट पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा सुरैयाले भनेकी थिईन् – एक दिन सुटिंगको क्रममा मैले देवले दिएको औंठी लगाएको थिए, तर हजुरआमालाई यसको बारेमा थाहा भयो। उहाँले जबरजस्ती त्यो औठी मेरो हातबाट निकाल्नुभयो। मलाई थाहा थियो कि साथीहरूसँग ऋिण लिएर देवले मेरो लागि त्यो बहुमूल्य औंठी किन्नुभएको थियो । त्यो रात म धेरै रोएँ।
सुरैया र देवलाई एक हुन नदिने सुरैयाकी हजुरआमाले निर्णय गरेकी थिइन । अन्तिममा त्यहि भयो। देव आनन्दलेपछि कल्पना कार्तिकसँग विवाह गरे तर सुरैया जीवनभर अविवाहित रहिन्। त्यस समयमा, सुरैयाले देव आनन्दसँग विवाह गर्ने हिम्मत गर्न सकिनन् तर देवका लागि सधैं अविवाहित नै रहिन् । ३१ जनवारी २००४ मा ७४ बर्षको उमेरमा सुरैयाको निधन भयो । सो समय सबैले देव आनन्द उनलाई अन्तिम विदाई दिन आउने अपेक्षा गरेका थिए तर उनी आएनन् । साथै देव आनन्दको ८८ बर्यको उमेरमा ३ डिसेम्बर २०११ मा निधन भयो । यसरी एक प्रेम कहानीको दुखद अन्त्य भयो।
४. अमीषा पटेल
५. सुष्मिता सेन
बलिउडकी नायिका तथा पूर्व मिस युनिभर्स सुष्मिता सेनको प्रेमको चर्चा विक्रम, भट्ट, मुद्दसर अजीज, सञ्जय नारंग, रणदीप हुड्डा, इम्तियाज खत्री, बन्टी सचदेव, अनिल अम्बानी र वासिम अक्रिमजस्ता व्यक्तिसँग थियो । यति धेरै अफेयर्सका बाबजुद उनी दुई बच्चाकी एकल आमा हुन् । सुष्मिता सेन लामो समयदेखि रोहमान शालसँग सम्बन्धमा छिन् । दुबैले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो सम्बन्ध स्वीकारेका छन्। तर विवाह भने भएको छैन ।
काठमाडौं – ‘हाउसफूल ४’ को प्रचारका लागि बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले पूरै ट्रेन बूक गराएका छन् । उनी बुधबार १६ अक्टोबर ३ बजे दिनमा मुम्बई सेन्ट्रलबाट चलेर १७ अक्टोबर बिहीबार दिल्ली पुग्नेछ । अक्षयले ८ डब्बाको रेलमा चढेर फिल्मको प्रचार गर्नेछन् । रेलमा सेलिब्रेटी र पत्रकार शयर गर्नेछन् । पश्चिम रेलवेका मुख्य जनसम्पर्क अधिकारीका अनुसार […]
पाकिस्तानी गायिकाले नेपाली यो गित गाएपछि सामाजिक सञ्जालमा भाइ’रल (भिडियोसहित)
काठमाडौं – मित्रराष्ट्र पाकिस्तानकी गायिका सारा राजा खानले नेपाली गीत ‘कुटुमा कुटु सुपारी दाना’ गाएको भिडियो सामाजिक संजालमा भा’इ ’र’ल बनेको छ । खानले एक कार्यक्रममा नेपाली गीत गाएपछि त्यसको भिडिओ भा’इ’ र’ल भएको हो । साराले नेपाली गीत गाउँदा कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली तथा पाकिस्तानी दर्शकले उनको प्रशंसा गरेका थिए । उनले पाकिस्तानी नै गायक/गीतकार […]
टिकटकबाट अभिनय, नृत्य र अन्य बिधामा आफ्नो भविष्य खोज्नेहरु धेरै छन् । कतिले टिकटकबाटै उठेर आफ्नो सपना पुरा गर्दै जीवन स्तर उकासिसकेका छन् भने कति अझै त्यो सपना पुरा गर्न टिकटकमा राम्रा र स्तरिय प्रस्तुतिहरु दिन तल्लिन छन् । बिकृतिहरु आफ्नो ठाउँमा छन्, अर्को तर्फ राम्रा प्रस्तुतिहरु दिदै सबैलाई मनोरन्जन दिनेहरुको पनि कमि छैन, टिकटकमा […]